ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများအတွက် မန္တလေးအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှ အလှူငွေပေးအပ် | NLD
Home News ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများအတွက် မန္တလေးအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှ အလှူငွေပေးအပ်
Posted By: mygate wayon: September 18, 2017 In: News, State and Division NewsNo Comments
၁၇. ၉. ၂၀၁၇
ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများအတွက် မန္တလေးအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှ အလှူငွေပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကို နေပြည်တော်စည်ပင်ရိပ်သာ(၂) Unison စားသောက်ဆိုင်တွင် ပြုလုပ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ လစဉ်ပုံမှန်ကျင်းပသည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်နေသည့် အဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှုးအဖွဲ့ဝင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များက လက်ခံပေးခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရခိုငျပွညျနယျဒသေခံ တိုငျးရငျးသားမြားအတှကျ မန်တလေးအခွစေိုကျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမြားမှ အလှူငှပေေးအပျခွငျး အခမျးအနားကို နပွေညျတျောစညျပငျရိပျသာ(၂) Unison စားသောကျဆိုငျတှငျ ပွုလုပျသော အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၏ လစဉျပုံမှနျကငျြးပသညျ့ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျ အစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျနသေညျ့ အဖှဲ့ခြုပျအတှငျးရေးမှုးအဖှဲ့ဝငျ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျမြားက လကျခံပေးခဲ့ပွီး ရခိုငျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဦးညီပု မှ ကြေးဇူးတငျစကားပွနျလညျပွောကွားခဲ့ပါသညျ။